I-china logo eprintiweyo yokuprinta ikofu 350g iphepha elimhlophe lephepha lomvelisi kunye noMthengisi | Huaguang
| --Ibhokisi yekhadi yeKofu
Ibhokisi yekhadi yekhofi
Ubukhulu: 17 * 8 * 3.5cm
Uhlobo lwePhepha: ikhadi elimhlophe
Iinkcukacha zokupakisha: Iikhompyuter ezingama-50 kwibhola eninzi okanye imfuneko sakho
Ubungakanani (iibhokisi) 1 - 5000 5001 - 50000 > 50000
Imotod ibhokisi ukupakisha kusetyenziswa ngokubanzi. Umzekelo, kwishishini lokutya, kukho imoto yekofud iibhokisi, imoto yeelekesed iibhokisi, imoto yecookied iibhokisi njalo njalo. Umzi mveliso wobuhle ungaphezulu, njengebhokisi yamakhadi omlomo, ibhokisi yemaski,itoni ibhokisi yekhadi njalo njalo; Kukwakho nomzi mveliso wezihlangu nempahla, onjengeekawusi, iimpahla, iimpahla zangaphantsi njalo njalo. Xa kuthelekiswa nebhokisi yesipho, ibhokisi yekhadi ayibizi, kwaye ibhokisi yekhadi inokugoqwa, egcina kakhulu iindleko zokuhamba. Kwaye ibhokisi yekhadi ilungile njengebhokisi yesipho kuyilo, umgangatho kunye nokubonakala. Namhlanje, masabelana ngeebhokisi zeekhadi ezintle:
1. Iibhokisi zamakhadi zinokwenziwa kwiibhokisi zezipho, kusetyenziswa amakhadi amhlophe angama-400g, ukushicilelwa kwemibala emine, i-UV engaphelelanga, ifilimu ye-matte egubungela umphezulu, ibhokisi yokusika yonke, ibhokisi yokuphawula uphawu, xa kuthelekiswa neebhokisi zekhadibhodi. ngokufanayo, kodwa uziva ngokwahlukileyo.
2.Ibhokisi yamakhadi ebakala lokutya, izinto ezihlangeneyo zokhuselo lokusingqongileyo, iigram ezingama-350 zephepha elikhethekileyo lokutya, ifilimu ye-matte, akukho zinamathelisi, ezinokusongwa zibe yibhokisi, akukho sidingo sokukhathazeka malunga nebhokisi eya kungcolisa ukutya.
3. Iigram ezingama-350 zamakhadi amhlophe, ukushicilelwa kwemibala emine, umphezulu wefilimu ye-matte, emva kokuba usonge unokuba yibhokisi yekhadi le-polygonal, vula isiciko sebhokisi ukubeka iswekile eyonwabileyo, enemfashini kwaye intle.
4. ikhadi elimhlophe elingu-300g, ukuprinta umbala ombala + umbala omane wokuprinta, emva kokwenza ukusika okufayo, ifilimu yomphezulu womthi, ngesiphatho sebhebhoni.
5. Iigram ezingama-350 zephepha lomgubo, umphezulu we-CMYK +2 wokushicilela umbala wepantong, isilivere eshushu yasekuhlaleni + i-convex yendawo, imvakalelo yokuziva ungalingani, kunye neoyile ebuyayo, nokuba yeyiphi kumbala kunye nokuthambeka, bonisa ngokucacileyo iimveliso eziphezulu kunye incasa; faka 1mm incence iphepha pantong umbala yoshicilelo ezantsi, emva die-ukusika ukulungisa imveliso.
6. Iigram ezingama-300 zamakhadi amhlophe, umbala om-2 wepant + umbala we-CMYK wokuprinta, umbala ochanekileyo wokuprinta umbala, awuyi kuthoba ukubonakala kwebhokisi; I-UV yendawo, ibalaselisa iimpawu zemveliso, umphezulu ogqunywe ngefilimu ye-matte, ungene ebhokisini emva komoya ophezulu.
7.Ibanga lokusingqongileyo i-300g ikhadi elimhlophe, i-3 ye-pantong + yokushicilela i-CMYK, umbala oqaqambileyo awuyi kuba ngumbala, inwebu yangaphakathi kunye ne-UV yendawo, bonisa iimpawu zemveliso, isiciko sangaphakathi nefilimu ethambileyo, emva kokugoba ebhokisini icocekile kwaye isempilweni ngaphandle kokulahleka ubungakanani.
8. Iigram ezingama-300 zephepha elingumgubo, umbala om-2 wepant + umbala we-CMYK, ukuqinisekisa ukuba umbala wokuprinta ucacile kwaye awukhethi umbala, LOGO iphuma emva kokuvela okucacileyo ngakumbi, kunye noshicilelo lombala wepantong wokushicilela incidi yokulungisa imveliso, ukuphucula inqanaba imveliso, emva wokulaminetha die ukusika, ibhokisi imveliso yokugqibela.
9. Iigram ezingama-300 zamakhadi amhlophe, hayi ukubhitya, ifilimu yokushicilela ye-CMYK, eyomeleleyo kwaye engonakalanga ngokulula, ekugqibeleni imile ibhokisi yebhokisi esikiweyo.
10.Iigram ezingama-300 zekhadi lesilivere matte, tsiba umaleko we-inki emhlophe (indawo yengingqi ayifuni kuprinta i-inki emhlophe), kunye nokuprinta kwe-CMYK + 2 umbala wepantong, ukuqinisekisa ibhokisi yemibala efanayo, kunye neoyile eguqukayo, yenza isilivere Umbala weebhokisi zebhokisi eqaqambileyo, LOGO isiliva eshushu eshushu, kwimeko yokukhanya, imibala ekhanyayo, ekugqibeleni ifa isika ebhokisini, iimveliso ezizinzileyo ezinokufakwa okumhlophe ngaphakathi.
11. 400 g yekhadi elimhlophe, CMYK +2 pantong yokuprinta umbala, ukuqinisekisa ukuba umbala webhokisi awuthathi icala, umphezulu ogqunywe ngefilimu ye-matte, i-flash yendawo ye-UV, ezinye iindawo zenza isiphumo se-convex, imilo yebhokisi iyonke inesidima kwaye intle, iyavisisana.
12. I-350 gram yephepha lempuphu, i-CMYK +2 yokuprinta umbala we-pantong, umbala webhokisi ebusweni ukhululekile kwaye uqaqambile, ukuze kuqinisekiswe ukufana kombala, umbala wepantong osetyenziswa kwezinye iindawo, umphezulu weoyile ye-matte, nokuba lilitha lokuqala lephepha okanye i-inki yokuprinta iya kuncitshiswa, kwaye ikhusele ibhokisi, kunye nokufakwa kwemveliso kwiimveliso ezizinzileyo.
13. Iigram ezimhlophe ezingama-300, i-CMYK +2 ye-pantong yokuprinta umbala, ulungelelwaniso olufanelekileyo, kufuneka uqinisekise umbala weqhekeza ngalinye leyunifom yebhokisi, umphezulu ogqunywe ngefilimu ethambileyo, izandla ziziva zahluke ngokupheleleyo, i-UV yalapha ibalaselisa ubuntu bemveliso, ngokufakwa kwe-blister
Egqithileyo Ibhokisi yamaphepha okhathalelo lolusu ifakwe kunye nebhokisi yohlobo lwePVC
Okulandelayo: Iimveliso ezintsha ezinqabileyo zentengiso erisayikishwe ngokutsha ngobuchwephesha kwibhokisi yokupakisha engenanto